20 Eziokwu Banyere Nwepu Agaba Nke Ga-eju Gị | Ngwọta OMG
Eziokwu 20 Banyere Idozi nke Agadi nke Ga - eme Ka I
Mmetụta nke owu ọmụma na ịnọpụ iche pụrụ iduga nnukwu nsogbu maka ahụike agadi. Ịghọta ihe kpatara ya na ihe ndị dị ize ndụ maka ịhapụ onwe gị pụrụ inyere anyị aka igbochi ya.
Ọ dịghị onye na-eme ka atụmanya nke ịka nká na-enweghị onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ ha nọ n'akụkụ, n'enweghị ndị enyi na-enyere ha aka ịchị ọchị na akụkụ ndị na-asọ oyi ma na-akwado ha n'oge oge siri ike. Ma nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ndị okenye nke North America na-eche ihu. Ka ọgbọ nke ọgbọ ọhụrụ na-agafe ụzọ 65, ọ na-etolite; ma ọtụtụ ndị anyị hụrụ n'anya merela agadi ka na-enwe mmetụta nanị n'ime ìgwè mmadụ ahụ.
Nkọwapụta na Ịnọpụ Iche
Dị ka US Census Bureau 11 nde, ma ọ bụ 28% nke ndị nọ na 65 na okenye, biri nanị na 2010. Ka ndị mmadụ na-etolite, ọ ga-abụ na ha nwere ike ibi ndụ nanị ha. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị toworo eto enweghi ụmụ, na-akọ AARP, nke ahụ pụtara Ole na ole ndị òtù ezinụlọ ga-enye ụlọ ọrụ na nlekọta dị ka ndị okenye na-aghọ agadi.
Ọ bụ ezie na ịnọ naanị ya enweghị ike ịkpata ịhapụ mmadụ, ọ bụ ihe kpatara ya. Ma ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa bụ ọtụtụ mgbe ndị agadi na-etinye aka na ọrụ mmemme.
Statistics Canada na-akọ na 80% nke Ndị agadi nke Canada soro na otu ma ọ bụ karịa ọrụ na otutu oge (ma ọ dịkarịa ala kwa ọnwa) - mana nke na-ewepụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị agadi anaghị etinye aka na mmemme kwa izu ma ọ bụ ọbụna kwa ọnwa.
Mmekọrịta ndị na-elekọta mmadụ na-akawanye njọ ka anyị na-eto maka ọtụtụ ihe kpatara ya, gụnyere ezumike nká, ọnwụ nke ndị enyi na ezinụlọ, ma ọ bụ enweghị njem. N'agbanyeghi ihe kpatara nsogbu nke ndi isi, ihe nwere ike ime ka o di egwu na ihe ojoo. Ọbụna ọhụụ nke ndị mmadụ na - anọpụ iche - mmetụta ị na - enwe nanị - bụ ọgụ maka ọtụtụ ndị toworo eto. N'ụzọ dị mma, afọ iri abụọ gara aga achọpụtawo nyocha dị ukwuu banyere ihe ize ndụ, ihe kpatara, na igbochi owu ọmụma na ndị agadi.
Nzuzo 11314 8 Echiche Taa